Tenisy – “Roland Garros”: hidona amin’ilay Sinoa, i Wang, i Tessah - ewa.mg
News - Tenisy – “Roland Garros”: hidona amin’ilay Sinoa, i Wang, i Tessah
Mitohy anio ny fifaninanana,
hiadiana ny “Roland Garros”, taranja tenisy, ho an’Andrianjafitrimo
Tessah. Hiditra eo amin’ny fihodinana faharoa izy ka hidona
amin’ily teratany sinoa, i Xinyu Wang, amin’izany. Ambony ny
filaharan’ity mpifanandrina aminy ity satria faha-145 maneran-tany.
Vao 18 taona monja ity Sinoa ity ary indroa nandray anjara tamin’ny
“Crand chelem” dia ny “Australian open”, ny taona 2018, sy ny
“Wimbledon”, ny taona 2019. Resy teo amin’ny fihodinana voalohany
avokoa izy tamin’izany, ary sambany tamin’ity vao tafita amin’ny
Ho mafimafy, araka izany, ny
miandry an’i Tessah satria mpilalao efa manana traikefa ny
hikatroka aminy. Heverina kosa fa tsy maintsy hanohitra hatramin’ny
farany ny tovovavy amin’izany. Tsiahivina fa ilay Espaniola, i
Nuria Parrizas Dias, no resin’i Tessah teo amin’ny fihodinana
voalohany raha nahalavo ilay Amerikanina, i Robin Anderson, kosa ny
an’i Xinyu Wang.
Ankoatra izay, nifarana teo amin’ny
fihodinana voalohany ny dian’i Irina Ramialison. Niondrika teo
anatrehan’ilay Aostralianina, i Astra Sharma, tamin’ny seta 2 no ho
0 (6/4; 6/4), izy. Hikatroka amin’ilay Japonezy, i Yuki Naito, izay
nandresy ilay Frantsay, i Amandine Hesse, i Sharma, eo amin’ny
dingana manaraka. Tsiahivina fa fifanintsanana hidirana ao anaty
tabilao lehibe izy ity, izay hifarana rahampitso zoma. Ny
alatsinainy 28 septambra kosa vao tena hanomboka ny lalao.
L’article Tenisy – “Roland Garros”: hidona amin’ilay Sinoa, i Wang, i Tessah a été récupéré chez Newsmada.
Noraisim-potsiny teo ampanamboarana vola sandoka, tany Antsirabe ireo olona telo, nahitana lehilahy roa sy vehivavy iray, mitonona ho mpiasan’ny Banky foibe, afak’omaly. Nanaovan’ny kaomandin’ny tobimparitry ny Zandarimaria (CB) velapandrika izy ireo. Ravin-taratasy efatra voadidy toy ny vola no narotsaka tao anaty ranona vovon-tsavony, avy eo lasa efatra alina ariary, no nifanarahan’ny zandary ka namandrihana azy telo. Hafainganan-tanana Avy tamin’ny angom-baovao azon’ny Zandarimaria any Antsirabe, tamin’ny 16 jolay lasa teo, no nahafantarana ny fisian’ireo olona mpanamboatra vola any an-toerana. Vehivavy iray no tafahaona tamin’ ny lehiben’ny borigady. “Nolazainy fa misy mpiasan’ ny Banky foibe avy aty Antananarivo afaka manamboatra vola taratasy. Akora hafa no ampiarahana aminy ka rehefa sasana miaraka ireo zavatra ireo no mamoaka vola iray alina ariary na roa alina ariary tena izy”, hoy ny loharanom-baovao any Antsirabe. Nifandray an-tariby sady nifanaraka ny handoa vola folo tapitrisa ariary mba hahazoana vola avy namboarina mitentina 30 tapitrisa ariary tamin’ireo olona nitonona ho mpiasan’ny Banky foibe ny lehiben’ny zandary. Natao, ny andron’ny 18 jolay, ny andrana sy fifanakalozana tao amin’ny trano fandriam-bahiny iray eny Ambavahadimangatsiaka. Tonga tao tokoa ny lehilahy roa sy vehivavy iray nitondra ravintaratasy voadidy toy ny vola iray alina ariary, izay voafono tamin’ny taratasy vy fotsy sy akora hafa. Nasain’izy ireo nitondra vovontsavony sy fanindrona ilay lehiben’ny zandary. Niaraka tamin’ny fandrebirebena samihafa ny hakingan-tanana nataon’ ireto mpanao vola sandoka, ka namoahan’izy ireo vola taratasy roa alina miisa efatra, taorian’izay. Efa fantatra mialoha anefa ny teti-dratsin’ireto telo mianadahy ireto ka niditra mora sy nisambotra azy ireo ny ekipan’ny Zandarimaria any Antsirabe, rehefa vita ny fandre-bireben’izy ireo. Mandeha ny famotorana azy telo, amin’izao fotoana izao. L’article Telo mianadahy tra-tehaka teo am-panamboarana vola sandoka est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy fanjarian-tsakafo any atsimo: nanome 2,5 tapitrisa dolara ny Amerikanina
Mampanahy ny fanjakana amerikanina ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any atsimo. Nanolotra 2,5 tapitrisa dolara izy ireo, omaly, hampiasain’ny Unicef sy ny Pam hikarakarana ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo.Nisy fanadihadiana natao ny volana avrily lasa teo nahafahana naminavina fa zaza maherin’ny 119 000 ny ho voan’ny tsy fanjarian-tsakafo ka19 000 amin’izy ireo ny ho tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin’ny distrika enina any atsimo, amin’ity taona ity. Mitarika ny fahafatesan’ny 44%-n’ireo zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara ny tsy fanjarian-tsakafo. Vokatry ny tsy fahampian’ny rotsak’orana, sahirana amin’ny fiahiana sakafo ny mponina any atsimo. “Manahy mafy izahay noho ny tsy fanjarian-tsakafo ateraky ny haintany, loza manambana any atsimon’i Madagasikara”, hoy ny masoivoho amerikanina miasa eto amintsika, i Michael P. Pelletier. Nanolotra vola mitentina 2,5 tapitrisa dolara hamatsiana ireo fandaharanasan’ny Unicef sy Pam mandra-pahatapitry ny fotoan’ny maitsoahitra ny governemanta amerikanina, omaly.Ahafahan’ny zaza 64 000 tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahazo fitsaboana vonjy aina ny tohana azo. Hampiasain’ny Unicef sy ny Pam ny famatsiam-bola hividianana sakafo vokatra eto an-toerana manana singa manokana mampatanjaka hanampiana ireo zaza latsaky 5 taona hahazo lanja haingana. Ho an’ny Unicef ny 1 tapitrisa dolara hitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika any amin’ny distrika valo: Ampanihy, i Bekily, i Betioky Atsimo, i Beloha, i Tsihombe, Amboasary, Ambovombe ary i Taolagnaro. Sakafo ara-pahasalamana be otrikaina ny hozarain’ny mpiasan’ny fahasalamana voaofana. Alefa eny amin’ny hopitaly ny zaza tsy nahazoana vokatra tsara hanaraka fitsaboana sy fikarakarana fanampiny. Ho an’ny Pam ny sora-bola mitentina 1,5 tapitrisa dolara hitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika antonony. Hahazo fanampin-tsakafo tonga dia vonona (RUSF), mahavelona sy mitondra hery ary misy vitamina sy mineraly, ny zaza tafiditra amin’ny sokajy. Efa ampiharina amin’ny distrikan’Amboasary, Ambovombe, Ampanihy ary i Bekily ny fandraisana an-tanana ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika antonony.VonjyL’article Tsy fanjarian-tsakafo any atsimo: nanome 2,5 tapitrisa dolara ny Amerikanina a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: horaisin’i Madagasikara ny fivorian’ireo rafitra miady amin’ny kolikoly aty Afrika
Hatao eto amintsika amin’ny taona ho avy ny fivoriamben’ny fikambanana miady amin’ny kolikoly aty amin’ny kaontintan’i Afrika (AAACA). Nivoitra izany tamin’ny fihaonan’ny filohan’ny fahefam-panjakana miady amin’ny kolikoly (ANLC) avy any Benin, i Jean Baptiste Elias sy ny tale jeneralin’ny Bianco, Andrianairina Laza Eric, omaly teny Ambohibao. Niatrika izany koa ny avy amin’ireo rafitra miady amin’ny kolikoly eto amintsika. Eo ny Komitin’ny fahitsiana (CSI) sy ny Samifin ary ny Pac. Voaresaka ny fifanakalozana traikefa sy ny fametrahana ny paikady amin’ny ady atao amin’ny kolikoly. Tafiditra amin’ny fiaraha-miasan’ny samy tatsimo izany. Teo koa ny fanazavana ny fomba fiasa samihafa amin’ny fampiharana ny lalàna sy ny fisorohana. Voatanisa ny nananganana ny Pac, ny lalàna amin’ny fanagiazana ireo harena na vola azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna. Ny ady atao amin’ny famotsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin’ny asa fampihorohoroana…Synèse R. L’article Fiaraha-miasa: horaisin’i Madagasikara ny fivorian’ireo rafitra miady amin’ny kolikoly aty Afrika a été récupéré chez Newsmada.
Fepetra manokana amin’ny fanadinana :: Afaka miatrika ny Cepe any amin’ ny faritra mahataraiky azy ny mpiadina
Nandray fepetra ho an’ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana Cepe, taraiky any amin’ny faritra noho ny tsy mbola fisokafan’ny lalana, ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (MEN). Afaka mandray anjara any amin’ny toerana misy azy ireo mpianatra ireo. Efa vita kosa ny fanapariahana ny laza adina sy ireo kojakoja ara-pahasalamana rehetra ho an’ireo faritra isanisany. Azo atao koa ny maka ny taratasy fiantsoana na amin’ny andron’ny fanadinana aza, ho an’ireo tsy mbola naka izany. Mizotra an-tsakany sy an-davany ny fiomanana rehetra ary vonona hiatrika ny fanadinana ny Fari-piadidiampampianarana sy ny foibempanadinana rehetra. « Omena alalana hahazo hiadina any amin’ny toeram-panadinana akaiky azy ireo mpiadina tavela any amin’ny faritra hafa, saingy tokony hampiseho ny dika mitovy amin’ny taratasy fiantsoana tany amin’ny toerana nisoratany anarana », hoy Raoniherijaona Andriamiakatsilavo, tale jeneraly misahana ny pedagôjia ao amin’ny MEN. Mila manatona ny Fari-piadidiam-pampianarana na Cisco na ny foibem-panadinana kosa ireo manana olana amin’ny taratasy fiantsoana. Efa vita ny famendrahana ranompanafody avokoa ireo foibem-panadinana sy ny efitrano. Anio no afaka mijery ny efitranom-panadinana ireo mpiadina. L’article Fepetra manokana amin’ny fanadinana :: Afaka miatrika ny Cepe any amin’ ny faritra mahataraiky azy ny mpiadina est apparu en premier sur AoRaha.
Mitaky ny hamerenana amin’ ny laoniny amin’ny fotoana faran’ izay haingana ny faritra nihotsaka eny Ampasamadinika ny mponina eny an-toerana. Efa andro maro no notataovandoza ireo fianakaviana maro lasibatr’ity tranga ity saingy tsy mbola nanomboka, hatramin’ny omaly, ny asa fanarenana sy fanamboarana an’ilay lavaka mangotanatana eo amin’ny faritra fivezivezen’izy ireo. Tsy mety voavaly ara-dalàna sy ara-drariny ny antso vonjy ataon’ny mponina. Nametraka sora-baventy ho fanairana an’ireo tompon’ andraikitra sy manampahefana isan’ambaratongany ny mponina, tamin’ny faran’ny herinandro. Tahotra andro aman’alina amin’ny loza mety haterak’ity fihotsahan-tany ity no iainan’izy ireo satria zara fa nosaronana labasy fotsiny ny faritra mihotsaka. Tsy nisy tohiny ny fe-potoana fanarenana ny simba nomen’ny kaominina Antananarivo renivohitra tamin’ny tompon’ny tany, izay voalaza fa fototry ny fihotsahana. Fijerena ny lafiny teknika “Olona mitaona fasika sy vato kely no mifamezivezy ety, andro vitsivitsy izay, kanefa tsy misy asa mandeha akory. Tsy hahatazona ny tany mihitsy io labasy io raha sanatria ka ho avy be indray ny orana. Trano ampolony no tandindonin-doza ety. Manginy fotsiny ny fahasahiranana amin’ny lalana ifamezivezena. Miantso ny kaominina izahay amin’ny fanairana mafy an’ilay tompon’antoka izahay, sao hitera- doza ho anay ny mety fitaran’ ny fahasimbana”, hoy ny raim-pianakaviana monina, eny Ampasamadinika. Nambaran-dRasamoelimihamina Niry, talen’ny fanajariana ny tanàn-dehibe ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra (CUA), fa efa noterena hanao ny asa ilay olona mba hiarovana ny toerana ao anatin’ny fotoana fohy. “Efa nosaronany aloha ny toerana. An-dalam-pandinihana ny fanatanterahana ny asa izy ireo, amin’izao fotoana izao, satria tsy afaka tonga dia hatao amin’izao. Misy lafiny teknika tsy maintsy jerena mikasika ny zavatra sao sanatria hisy olana indray”, araka ny fanampimpanazavany. L’article Loza mitatao :: Mamerina miantso vonjy ny mponina eny Ampasamadinika est apparu en premier sur AoRaha.
5 pagodes Iavoloha: nankahery ireo zaza kamboty ny MDN
Miisa 13 mianadahy ireo ankizy tezaina ao amin’ny tobin’ny miaramila Antsavasoa “5 pagodes” Iavoloha ka 6 hatramin’ny 16 taona izy ireo. Nitsidika azy ireo ny fikambanan’ny vehivavy eo anivon’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena (MDN) izay ivondronan’ireo mpiasa sivily sy ny vadin’ny mpiasa na sivily na miaramila, omaly. Nitarika izany teny an-toerana Ranaivoseheno Lala vadin’ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Hita fa manano sarotra tokoa ny fampidirana mpianatra ka izany indrindra no nahatonga ireto mpikambana ireto nanome fanampiana sy fankaherezana ireo ankizy. Nankasitraka azy ireo ny lehiben’ny akany, ny Jly RAmahavonjy José, noho izao fitsinjovana manokana ireto ankizy ireto izao.Jean ClaudeL’article 5 pagodes Iavoloha: nankahery ireo zaza kamboty ny MDN a été récupéré chez Newsmada.